အကောင်းဆုံး varibloc ဂီယာအုံထုတ်လုပ်စက်နှင့်စက်ရုံ နင်
Varibloc ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာ၊ ဘီးဖြင့်ညှိထားသောဂီယာအချင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူခါးပတ်ဖြင့်အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Varibloc နှင့် varimot ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာများသည် ၁: ၃ မှ ၁း၈ အထိသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးတွင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြောင်းလဲနိုင်သောစက်မှုအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောရိုးရှင်း။ ကြံ့ခိုင်သောမောင်းနှင်စက်များဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကို AC motor များနှင့်ပေါင်းစပ်။ output speed နှင့်နိမ့်သော torque ကိုပြောင်းလဲနိုင်သော speed drives များအားထုတ်လုပ်ရန် gear unit များလျှော့ချနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာများသည်အမြန်နှုန်းနှင့် torque တန်ဖိုးများရှိသည့်တန်ဖိုးနည်းသော drive များဖြစ်သည်။
Varibloc ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာ၊ ဘီးဖြင့်ညှိထားသောဂီယာအချင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူခါးပတ်ဖြင့်အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Varibloc နှင့် varimot ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာများသည် ၁: ၃ မှ ၁း၈ အထိသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးတွင်အပြတ်အသတ်ပြောင်းလဲနိုင်သောစက်မှုအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောရိုးရှင်း။ ကြံ့ခိုင်သောမောင်းနှင်စက်များဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကို AC motor များနှင့်ပေါင်းစပ်။ output speed နှင့်နိမ့်သော torque ကိုပြောင်းလဲနိုင်သော speed drives များအားထုတ်လုပ်ရန် gear unit များလျှော့ချနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောမြန်နှုန်းဂီယာမော်တာများသည်တန်ဖိုးနည်းသောမောင်းနှင်မှုများဖြစ်ပြီးအမြန်နှုန်းနှင့် torque တန်ဖိုးများကိုတစ် ဦး ချင်းတပ်ဆင်နိုင်ပြီး helical, parallel shaft helical, helical-bevel နှင့် helical-worm ဂီယာယူနစ်များတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုရိုးရှင်းသောပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း။
တိုးမြှင့်စတင် torque နှင့်အတူ 1. ကြံ့ခိုင်
2. လျှော့ချရေးဂီယာယူနစ်၏ကြီးမားသောခွင့်ပြုခဲ့ Overhung ဝန်
၅။ အမြန်နှုန်းကိုရပ်တန့်နေသည့်အချိန်၌ပင်ရွေးချယ်နိုင်သည် (Varimot သာ)
ကျွန်ုပ်တို့သည် varibloc ဂီယာအုံကိုတီထွင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအချိုးအစားနှင့်မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကိုဘီးညှိခြင်းဖြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်နားလည်နိုင်ရန်ဂြိုဟ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မြန်နှုန်းညှိအကွာအဝေး: 1: 1:10 မှ 1
လျှော့ချအချိုး: 1:3မှ 1: 100000
သတ်မှတ်ထားသော torque: 100Nm မှ 50000Knm
R17 R37 R57 R67 R77 R87 R97 R10 R R107 R137 R167RF17 RF37 RF57 RF67 RF77 RF87 RF87 RF97 RF107 RF137 RF147 RF167
FA27 FA37 FA47 FA57 FA67 FA67 FA77 FA87 FA97 FA107 FA127 FA157FH27 FH37 FH47 FH57 FH67 FH77 FH87 FH97 FH107 FH127 FH157 \_ t
ဘရိတ်အထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆေးသုတ်ခြင်းဖြင့်နှစ်ကြိမ်အနားကွပ် M1 M2 M3 M4 M5 M6 လမ်းညွှန်ချက်ကိုရရှိနိုင်သည်
SP1 SP2 SP3 SP4 အထူးသုတ်ဆေး ၅၀ မှ ၃၅၀ အမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
Type R ကို .. VU .. Varibloc ခြေလျင်တပ်ဆင်ထား helical ဂီယာယူနစ်
Type R..F .. VU .. Varibloc အနားကွပ်အနားကွပ် helical ဂီယာယူနစ်နှင့်အတူ
Type RF .. VU .. Varibloc အနားကွပ်အစိုင်အခဲရိုးတံ helical ဂီယာယူနစ်
Ty R ကိုX.. VU .. Varibloc ခြေလျင်တပ်ဆင်ထားသည့်အဆင့်တစ်ခုတည်း helical ဂီယာယူနစ်
Type RM .. VU .. Varibloc အနားကွပ်ချဲ့ထားသောအချက်အခြာ helical gear unit နှင့်အတူ
Type က F .. အပြိုင်ရိုးတံအစိုင်အခဲရိုး helical ဂီယာယူနစ်နှင့်အတူ VU .. Varibloc
Type အက်ဖ်အေ .. VU .. Varibloc အပြိုင်ဝင်ရိုးတံနှင့်ခလုတ် helical ဂီယာယူနစ်
Type FH .. VU .. Varibloc သည်ကျုံ့နေသော disc helical gear unit နှင့်အပြိုင်ရိုးတံဆွန်းရိုးတံနှင့်အတူ
Type FF .. VU .. Varibloc အပြိုင်ရိုးတံအနားအစိုင်အခဲရိုးတံ helical ဂီယာယူနစ်
Type FV .. VU .. Varibloc သည်အပြိုင်လှိုင်းအနားကွပ်နှင့်အတူ spline ဆွန်းပျံတက် helical ဂီယာယူနစ်
Type KA .. VU .. Varibloc perpendicular ဆွန်းရိုးတံ bevel helical ဂီယာယူနစ်နှင့်အတူ
Tperpendicular အစိုင်အခဲရိုးတံ bevel helical ဂီယာယူနစ်နှင့်အတူ ype K သည် .. VU .. Varibloc
Type KH .. VU .. Varibloc သည်ကျုံ့နေသော disc disc bevel helical gear unit နှင့် ပတ်သတ်၍ perpendicular ဆွန်းရိုးနှင့် Varibloc
Type KA .. VU .. Varibloc perpendicular အနားကွပ်နှင့်အတူအစိုင်အခဲရိုးတံ bevel helical ဂီယာယူနစ် mount
Tya ကေFperpendicular အနားကွပ်နှင့်အတူ .. VU .. Varibloc ဆွန်းရိုးတံခေါက် helical ဂီယာယူနစ် mount
စက်သီး Drive ကို
စက်သီး Drive ဂီယာယူနစ်
စက်သီး Drive ဂီယာအုံ
Duroed helical ဂီယာယူနစ်လျှော့ချရေး
စုဆောင်းသူများအတွက် cable ကို reel လျှော့ဂီယာအုံ